Nansi umzuzu wePremier League omuhle kakhulu we-2019-2020 - teles
Nasi isikhathi esihle kakhulu sePremier League sika-2019-2020
By brylandobe On UJul 26, 2020
Izinyanga eziyishumi nanye ngemuva kokudalwa kwaso, isizini yePremier ka-2019 - 2020 isicishe yaphela.
Kube nezinhloso ezinkulu, ukushayisana kwe-titanic kanye nezikhathi zomlando njengoba iLiverpool yanqoba isicoco sayo sokuqala esindiza phezulu eminyakeni engama-30 emkhankasweni ophazanyiswe ubhubhane lwe-coronavirus.
Sikucelile ukuthi ubheke izikhathi ezinhle kakhulu zesizini - futhi imiphumela ekhethwe abafundi be-BBC Sport iveziwe ngezansi.
Usengangena usebenzisa ithuluzi lesikhundla ezansi kwekhasi, kepha izinketho zakho ngeke zibheke emiphumeleni.
1. ILiverpool inqoba iligi futhi igubha ngemuva kokubuka iChelsea ishaya iMan City
UChristian Pulisic wavula amagoli emdlalweni othokozisayo phakathi kweChelsea neManchester City ngoJuni 25
Isikhathi eside, eside, eside, isikhathi eside, wonke umuntu wayazi ukuthi iLiverpool izowina iligi kule sizini.
Lokho bekungumbuso wabo ukuthi empeleni bekufanele bagubhe phambilini kunabaningi abazophumelela izihloko, kepha, ngenxa yobhubhane lwe-coronavirus kanye nekhefu lezinyanga ezintathu ngesizini, isikhathi saqinisekiswa kuphela NgoJuni 25.
Ngalo lolo suku, abadlali beLiverpool nabalandeli babukela iManchester City ithatha iChelsea, bazi ukuthi uma uhlangothi lukaPep Guardiola luhluleka ukunqoba, iminyaka engu-30 kaReds ilinde isihloko esiphakeme kakhulu sendiza kuqedile.
ICity ilahlekile kodwa umdlalo uqobo lwawo wawungokujabulisa kakhulu selokhu kwaqala kabusha nokungezwani futhi kokukhululeka kwempempe yokugcina kungenzeka kuqinise imigubho yeLiverpool kuphela.
Bukela: Okwamanje lapho abadlali beLiverpool bethole ukuthi bangabanqobi
2. I-coronavirus iyeka isizini
Le midlalo ibuyile nemithetho yokuhlunyeleliswa kwezenhlalo endaweni ngemuva kokumiswa kwesizini kulandela isivivinyo se-coronavirus seMikel Arteta
Uma sikhuluma ngezikhathi zonyaka, kusobala ukuthi lokho kuyimali enkulu.
NgoMashi 12, i-Arsenal yaqinisekisa ukuthi umphathi we-Arteta wahlolwa ukuthi une-Covid-19. Ngosuku olulandelayo, ibhola elite elalimele laseBrithani lamiswa futhi lalingasakwazi ukuqhubeka kuze kube nguJuni 17.
3. ILeicester ifake ayisishiyagalolunye eSouthampton
Amagoli amathathu kaVardy afika ngesiwombe sesibili sokuphumelela kweSouthampton ngo-9-0
Uma ucabanga ukuthi iSouthampton idlale kanjani selokhu yaqala kabusha ngoJuni, kunzima ukukholwa ukuthi bebephelile ngokulahleka kwangaphambili kwesizini ecishe yaphindeka kabili.
Ngo-Okthoba, uLeicester wagqekeza njengoba u-Ayoze Perez noJamie Vardy bobabili beshaya amaqhinga hat 9-0 ukunqoba.
Kwakuyimpawu elihlazo ngaleso sikhathi futhi yabeka abaNgcwele endaweni yokudluliselwa, kepha ngezindlela eziningi kwakhombisa ukudalwa kwabo. Baqhubeke nokuphila ngokunethezeka futhi kungaba yisimangalo esihle sokulwa kakhulu ngesizini ezayo.
4. UNorwich ushaya iMan City
Ukunqoba kukaNorwich kwiManchester City kwaba okwesibili ekubuyeni kwabo kuPremier League
Ukubuya kukaNorwich kuPremier League kungenzeka ukuthi kube yinto yesikhashana nje, kepha kumele banconywe ngesitayela sabo sekudlule isikhathi.
Ukudlala kwabo kalula ibhola bekuyinto yokwamukelwa futhi ekuqaleni kwesizini kubasize bakhipha amahlukuzo ambalwa - ikakhulukazi lapho beshaya abagadli abavikela iManchester City ngo-3-2 ngoSepthemba.
Kwakuwukulahleka kokuqala kweCity kusuka ngoJanuwari 2019 futhi kunikeze amaCanaries ithemba lokuthi angakugwema ukuphahlazeka. Ekugcineni, baphelelwa umusi kodwa lo mphumela uzokhunjulwa isikhathi eside ngabalandeli beNorwich.
5. IWatford iyaphela ukugijima kweLiverpool okungathandeki
U-Ismaila Sarr ushaye amagoli amabili njengoba uWatford eshaya iLiverpool 3-0
Akekho owabona lo ozayo.
ILiverpool ibisemjikelezweni wayo wokuqina lapho ifika kuVicarage Road ngoFebhuwari ukuze ibhekane nohlangothi lweWatford ohlangothini lokungena futhi ngaphandle kokuwina emidlalweni yayo emihlanu edlule.
Kepha ama-Hornets ahambe ngesitayela sokuqeda i abawinile kusimangaze 3-0, kuqeda amathemba kaReds wokuqeda isizini ungabekezeleleki.
6. ILiverpool yashaya iMan City ukuze idlule ayisishiyagalombili
ILiverpool ikhiphe isitatimende ngokunqoba kwabo okuthe xaxa iManchester City ngoNovemba
Yimidlalo eyi-12 kuphela kule sizini neLiverpool esesishaye into engaphenduki impikiswano iManchester City.
AmaReds ashaye izimbangi 3-1 e-Anfield ukuthola amaphuzu okuhola ayisishiyagalombili phezulu etafuleni.
Phambili kwalo mdlalo bekuhloswe ukuthi kube yisikhathi esichazayo ekufuneni kweLiverpool yeminyaka engu-30 yokuthola lesi sihloko, futhi kwenzeka lapho abakwaReds beqhubeka nokuqinisa ukubambelela kwabo kuqala.
7. Isikhwama se-Spurs Pochettino
UPochettino waphangwa izinsuku ezingama-171 ngemuva kokuthatha iTottenham kowamanqamu weChampions League
UNovemba umaka ukuphela kwenkathi yamaSpurs lapho iMauricio Pochettino ukubhejwa ngemuva kweminyaka emihlanu nesigamu ekilabhini, noJose Mourinho washeshe waqokwa ukuba athathe indawo yakhe.
Isinqumo esifanele? Isikhathi sizosho, njengoba iTottenham ingakaqiniseki ukuthi isebangeni lesithupha eliphakeme noma ukudlala ibhola laseYurophu ngesizini ezayo.
8. Umgomo KaNdodana Omangalisayo Ngokumelene neBurnley
UNdodana Heung-min ugijime ama-yards angama-70 phansi kwetholi lokushaya leli goli elihle ngokumangalisa iBurnley
Eminye yale migomo yalesi sikhathi sonyaka kulukhuni kancane ukuyikhumbula uma ucabanga ukuthi kubukeka sengathi yaqala ngaphambi kokuqala kwesikhathi, kodwa isiteleka esisodwa siphawuleka: ubuhle be-Son Heung-min ngokumelene neBurnley ngoDisemba.
Umgadli weTottenham uthole ibhola ngaphandle kwebhokisi lakhe nemizuzwana eyi-12 nokuthinteka okungu-12 ngemuva kwalokho wahlakaza isivikelo futhi wahambisa uNick Pope ukusiza abakwaSpurs lapho benqoba -5.
Isiteleka sidlulise ukuvota kwabalandeli be-BBC ngoMeyi futhi okuncane kusukela kuqalile phansi ukusondela kulo mzamo omnandi wedwa.
9. UVardy ufinyelela izinhloso eziyi-100 zePremier League
Amagoli amahlanu kaJamie Vardy ahamba phambili kwiPremier League njengoba umgadli efinyelela ku-100 kwiLeicester
UJamie Vardy ujoyine iklabhu ekhethekile ekuqaleni kwale nyanga lapho izinhloso zakhe ezimbili bebhekene neCrystal Palace zenza loLeicester waqhubekisela phambili umdlali we-29 ukufinyelela imigomo ye-100 yePremier League emlandweni walo mncintiswano.
Kuyimpumelelo ehlaba umxhwele kakhulu, ngisho nangokwengeziwe uma ucabanga ukuthi ubesadlala ibhola okungelona elenigi eneminyaka engama-25.
10. Ama-blades athatha i-hit tech tech hit
U-Orjan Nyland waphatha ibhola ngaphezu kwegoli kodwa alibanjwanga yi-teknoloji
Akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi ubuchwepheshe bube yindawo yokukhuluma ngemuva kokuqala kwesizini - ngalo kanye usuku abuya ngalo, eqinisweni - yize lokho bekungahambisani nonompempe osize kakhulu wevidiyo.
Okwamanje ubuchwepheshe begoli obudale ukukhungatheka njengoba behluleka ukuthatha i-free kick ka-Oliver Norwood ewela umugqa ngesikhathi umdwebo ongenanjongo USheffield United e-Aston Villa.
11. Ukuqokwa kuka-Ancelotti njengoMqondisi we-Everton
U-Ancelotti ungene esikhundleni sikaMarco Silva kumaTofi
U-Everton wasusa ukuhlangana okukhulu ngoDisemba lapho bekwaze ukuheha abawinile amahlandla amathathu kwiChannel League uCarlo Ancelotti ukuba abe ngumqeqeshi wabo.
Ngaleso sikhathi, amaTofi ayesengozini yokungena empini yezidudla, kepha amaNtaliyane awakhipha engcupheni futhi abalandeli baka-Everton bazojabula ukubona ukuthi yini angayenza ngemuva komdlalo wokuqala. .
12. I-Horiz's Horror Show vs Man City
ULuiz ukhwebule iphutha elenziwa ngokulimala kweManchester City ngokuxoshwa
Usuku okufanele ukhohlwe ngalo UDavid Luiz njenganoma yini engahamba.
Ngokubhekene neManchester City e-Etihad Stadium ngoJuni, umvikeli we-Arsenal wehla ebhentshini ngesiwombe sokuqala, ubephethe umgadli kaRaheem Sterling, wanikeza inhlawulo wabe esehamba.
Kwakungeyona isikhathi esifanelekile, ngenkontileka yakhe ekupheleni kwale nyanga. Ngenhlanhla ngaye, u-Arteta wagcina ukholo futhi uLuiz wasayina inkontileka yonyaka owodwa ezinsukwini ezimbalwa kamuva.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/sport/football/53486619
I-Inter Milan inyukele kwesibili ku-Serie A ngokuwina ngo-3-0 iGenoa
Kuqubuke uManhunt eNingizimu Afrika ngemuva kokuphuma ejele kweziboshwa ezingama-69